Isihluzo, iMesh, iGrisi, isihluzo somlilo, isihluzo soMoya, ukupakishwa okucwangcisiweyo
I-aluminiyam yoluhlu lwe-hood yegrisi yokucoca Isihluzo sobusi
intsimbi engenastainless oil inkungu isihluzo / wire ezinithiweyo mesh filter
Umaleko ohlukeneyo wokucoca umnatha/idemister pad
Siye kwishishini lezinto zokucoca kunye nezixhobo zokwahlula ukusukela ngo-1990.Silishishini elisekelwe kubuchwephesha eligxile kuphuhliso, uyilo kunye nomvelisi wezinto zokucoca kunye nezixhobo zokwahlula kunye ne-30 year'experience.Inkampani iphumelele iziqinisekiso ze-ISO9001 zolawulo lwenkqubo yolawulo lomgangatho. .Iimveliso zenkampani zithunyelwa e-United States, eMzantsi-mpuma Asia, eYurophu, e-Australia, eRashiya kunye nezinye iintlanga ezininzi kunye nemimandla.
Ukuphucula ukhuseleko lwabasebenzi ngokubeka esweni ukuba sesichengeni kwiikhemikhali eziyityhefu
Sisebenzisa iikuki ukuphucula amava akho.Ngokuqhubeka ukhangela le sayithi uyavuma ukusebenzisa iikuki.Ingcaciso engaphezulu.Rhoqo kwimizuzwana engamashumi amathathu umsebenzi uyasweleka ngenxa yokuchanabeka kwiigesi ezinetyhefu kwindawo yokusebenza. Yabela umsebenzi ngamnye iyunithi yomntu ngamnye.
Ungayicwangcisa ngokwenyani iShit yakho ngezi zinto zingama-45 zeGenius
Sincoma kuphela iimveliso esizithandayo kwaye sicinga ukuba nawe uya kufumana inxalenye yeentengiso kwiimveliso ezithengiweyo kweli nqaku, elibhalwe liqela lethu lezorhwebo.Zininzi izibonelelo zokucwangcisa indawo yakho.Kwelinye icala, ungayifumana lula into oyikhangelayo...
Imakethi yeGlobal Welding Fume Emission Equipment Market ukuba ifikelele kwi-USD 5.1 yebhiliyoni ngo-2026.
Ingcali ye-DeFi uJim Bianco ujoyina uJared Blikre ngoLwesithathu, ngoJanuwari 12th ngo-2pm ET ukudiliza unyaka onomdla ngaphambili.I-Abstract: Imakethi yehlabathi ye-welding fume extraction equipment ifikelela kwi-USD 5.Iya kufikelela kwi-1 yebhiliyoni ngo-2026.Izisombululo ze-Fume kunye ne-dedusting zonyusa ukusebenza kakuhle kunye nokhuseleko lwam...